भाइमसला किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ मूल्यसूची !
तिहार नजिकिएसँगै भाइमसलाको बजार सुरु भइसकेको छ। काठमाडौं उपत्यकाका असन, इन्द्रचोक, न्यूरोड, कालीमाटी, पाटन, लगनखेललगायत अधिकांश क्षेत्रका पसलदेखि सडकपेटीसम्म पनि थरीथरीका भाइमसला सजाएर बेच्न राखिएको देख्न सकिन्छ।
तिहारको मौकामा कतिपय व्यापारीहरुले बाहिर निकै आकर्षक देखिने गरी प्याकिङ गर्ने तर भित्र म्याद गुज्रिएका तथा गुणस्तरहीन मसला राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। तिनै कम गुणस्तरका मसला खरिद गर्दा उपभाेक्ताले चर्को मूल्य तिरिरहेकाे हुन सक्छ। यसकारण भाइमसला खरिद गर्दा चलाखी अपनाउनु पर्दछ। भाइमसला प्याकिङ गरिएको मिति, उपभोग्य मिति, कम्पनीको नाम, मूल्य थाहा पाएर मात्र खरिद गरियाे भने ठगिने सम्भावना कम हुन्छ।
बजारमा ५० रुपैयाँदेखि २ हजारसम्मका भाइमसला प्याक
बजारमा ५० रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्मका भाइमसलाका प्याकेट बनाएर राखिएको व्यापारीहरुले बताएका छन्। यी प्याकेटबाट आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न सकिन्छ। भाइमसलाको प्याकेट नकिनेर खुल्ला किनेर पनि तिहारमा दाजुभाइलाई आफै भाइमसलका प्याक तयार गर्न पनि गाह्रो छैन।
भाइमसलाको मूल्य घट्यो
कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष भाइमसलाको मूल्य घटेको छ। खुद्रा व्यवसायी संघका अनुसार यस वर्ष भाइमसलाको माग नै घटेका कारण मूल्य पनि घटेको हो।
संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठ यस गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भाइमसलाको कारोबार करिब ४० प्रतिशतले कमी आउने बताउँछन्।
‘यस वर्ष भाइमसलाको व्यापार घट्ने पक्का छ। बजारमा माग कम भएसँगै भाइमसलाको मूल्यसमेत यो वर्ष घटेको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल लाइभसँग भने।
बजारमा आकर्षक देखिने प्याकेटमा पहिले जस्तो कम गुणस्तरका भाइमसला राखिने प्रवृत्ति विस्तारै कम भएको समेत उनको दाबी छ। बिक्री नभएका भाइमसला खुद्रा व्यापारीले होलसेलमा फर्काउने हुँदा हिजोआज त्यस्तो समस्यामा कमी आएको उनले बताए।
मूल्य घटे पनि उपभोक्ता झुक्याउँदैछन् व्यापारी
बजारमा भाइमसलाको मूल्य घटे पनि व्यापारीले उपभोक्तालाई झुक्याएर ठग्ने प्रवृत्ति भने कायमै छ। कोरोना महामारीका कारण मसलाको माग कम भई मूल्य घट्दासमेत कतिपय व्यापारीहरुले कोरोनाका कारण मूल्य चर्किएको भन्दै उपभोक्ता ठगी गरिरहेको पाइएको छ।
न्यूरोड, असन, कालीमाटी, कलंकी, कुलेश्वर लगायतस्थानमा नेपाल लाइभले सोधपुछ गर्दा कोरोनाको कारण देखाउँदै कतिपय व्यापारीहरुले उपभोक्ताहरुलाई पहिलेको भन्दा पनि मूल्य बढेको भन्दै झुक्याउने गरेको भेटिएको हो। यस्तो ठगी तथा कालोबजारीबाट बच्न उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्ने खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ।
यस्तो छ अघिल्लो वर्ष र यस वर्षको भाइमसलाको मूल्य अन्तर
नाम गत वर्षको मूल्य (प्रतिकेजीमा) यस वर्षको मूल्य रु (प्रतिकेजीमा)
ओखर ६२० देखि ७०० ६०० देखि ६५०
काजु ५५० देखि १७०० १४५० देखि १५५०
बदाम १३५० देखि १४०० १२०० देखि १२५०
पेस्ता १७०० देखि १९०० १८०० देखि १८५०
नरिवल ४८० देखि ५०० ४०० देखि ४५०
किसमिस ५५० देखि ६५० ५००
छोकडा २०० देखि २२० २००
ल्वाङ १८०० १३००
सुकुमेल ५५०० ४५०० देखि ५०००
मखना १२०० ९०० देखि १०००
अलैँची १५०० १२००
खुर्पानी १००० १०००
मिश्री २२० देखि २५० २००
दालचिनी ५५० ५००
अन्जिर २००० १८००
सुपारी (सिंगापुर) ४५० ४००
सुपारी (भारतीय) ६५० ८५० देखि ९००
(स्रोत खुद्रा व्यापार संघ)
महामारीबीच १ अर्बको व्यापार हुने अपेक्षा
कोरोना महामारीका बीच पनि यस वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भाइमसला व्यापार हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा व्यापार घटे पनि भाइमसलाको व्यापार १ अर्ब नाघ्ने व्यापारीहरुको अनुमान छ। गत वर्ष डेढ अर्बभन्दा बढीको भाइमसलाको कारोबार भएको थियो। कोरोना महामारीका कारण बजारमा उपभोक्ताहरुको चहलपहल कम देखिएकाले यस वर्ष व्यापार घट्ने पक्कापक्की भएको हो।
तिहारको समयमा नेपाली बजारमा अत्यधिक बिक्री हुने भाइमसलामा नेपाल परनिर्भर छ। तिहारका लागि आवश्यक मानिने मसलाजन्य वस्तु तिहारमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँको आयात हुँदै आएको छ। नेपालमा अत्यधिक मात्रामा भाइमसला भारतबाट आयात हुने गरेको छ। त्यस्तै चीन, अमेरिका, भियतनाम, युएई, थाइल्यान्ड, कतारलगायत दर्जनबढी मुलुकहरुबाट नेपालमा मसलाजन्य वस्तु आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तंथ्यांकले देखाएको छ।
-निर्मला घिमिरे, नेपाल लाइभ